Manohy ny sidina mpandeha miaraka amin'ny firenena efatra i Russia
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manohy ny sidina mpandeha miaraka amin'ny firenena efatra i Russia
Nandefa indray ny serivisy fiaramanidina miaraka amin'i Qatar, India, Vietnam ary Failandy i Russia
Nanambara ny tompon'andraikitra rosiana fa amin'ny 27 janoary 2021, dia hanohy ny sidina miaraka amin'ny firenena efatra i Russia, izay naato noho ny Covid-19 areti-mifindra.
Manomboka amin'ny Alarobia ho avy izao dia afaka misidina mankany Qatar, India, Vietnam ary Failandy ny olom-pirenena rosiana. Ny olom-pirenen'ireo firenena ireo, araka izany, dia afaka manidina any Russia. Toy izany koa ireo izay manana fahazoan-dàlana hipetraka any amin'ireo firenena ireo.
Ity fanapahan-kevitra ity hanohizana ny fifandraisan'ny rivotra amin'ireo firenena efatra ireo dia nataon'ny foibem-panjakana misahana ny serasera rosiana ho an'ny coronavirus, ary ny didy mifandraika amin'izany dia nosoniavin'ny praiminisitra federasiona rosiana.
Araka ny famoahana ofisialy, ny sidina mankany Qatar dia hiainga intelo isan-kerinandro, mankany India, Vietnam ary Failandy - indroa isan-kerinandro.
Nambara ihany koa fa hanokatra sisintany ho an'ireo mpizahatany vahiny i Sipra manomboka amin'ny 1 martsa.
Fizahan-tany any India: Miova eo an-tampony
Noraràn'ny Southwest Airlines ny biby fanampiana ara-pientanam-po